European Union Yobatsira Zimbabwe
European Union (EU) neZimbabwe dzaparura chirongwa chinokosha mamiriyoni gumi nerimwe emadhora eku America (US$11) chekuvanduza kutengeserana pakati peZimbabwe neEU.
Vachiparura chirongwa ichi, munyori mubazi rezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika, VaJames Manzou, vati chinangwa chechirongwa ichi, icho chinonzi Zimbabwe European Partnership Support, ndechekuti Zimbabwe iwedzere huwandu hwezvinhu zvainotengesa kuEU.
VaManzou vati mari yabviswa neEU ichabatsira kudzidzisa makambani madiki neari pakati nepakati kutevedzera zvinodiwa nemisika nemakambani ekuEU kuti zvinhu zvisadzorwe kuEU.
Vatiwo mari iyi ichashandiswa kuvandudza mitemo yekutengeserana munyika pamwe nekuona kuti Zimbabwe Revenue Authority inorerutsa mitemo yekutengeserana nedzimwe nyika.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaDavid Musabayana, vati chirongwa ichi chichabatsira nyika kuwana mari yekunze nekutengesa zvinhu zvakawanda kuEU.
Vati kuti chirongwa ichi chibudurire, vanhu vave kufanira kurima zvinhu zvinodiwa kuEU nedzimwe nyika dzepasi rese.
Vachitaura pachiitiko ichi, mumiriri weEU muZimbabwe, VaTimo Olkkonen, vatiwo chirongwa chavaparura nhasi chinoita kuti Zimbabwenedzimwe nyika dzemumatunhu eAfrica, Caribbean nePacific dzitengese zvinhu zvadzo kuEU pasina kupihwa miganhu kuti yogumira papi uye EU inofanirawo kuita zvimwezvo munyika idzi.
Vati kunyange hazvo huwandu zvezvinhu zvinotengeswa neZimbabwe kuEU hwawedzera, pane mukana wekuwedzera zvekare, sezvo pazvinhu zvese zvinotengeswa kunze neZimbabwe, zvikamu zvishanu chete kubva muzana, zvichienda kuEU.
VaOlkkonen vatiwo chirongwa ichi chakanangana nekusimbisa makambani madiki neari pakati nepakati kuti ikwanise kutengesa zvinhu zvawo kuEU.
Vatiwo chirongwa ichi chinotsigira masangano anoshanda nemakambani madiki munyaya dzenyama, miriwo, mhiripiri, michero, mhiripiri nePaprika.
Asi kunyange hazvo chirongwa ichi chiri kunzi chakanangana nemakambani madiki, mukuru werimwe sangano rinomirira makambani aya, VaFarai Mutambanengwe, vati hapana kana kambani diki iri kuwana mari pasi pechirongwa ichi sezvo paidiwa makambani anodyidzana nemakambani ekunze.
VaMutambanengwe vati vakashanda nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pakuronga hwaro hwechirongwa ichi, asi havana kuzopihwa mari pasi pechirongwa ichi.
Asi vati zvisinei nezvakaitika, vanotsigira chirongwa ichi sezvo chichibatsira nyika.
VaOlkkonen vati EU haina kumbogara yavhara misika kana makambani ayo kuti asatenge kubva kuZimbabwe asi kuti makambani emuZimbabwe ari kutadza kutevedza gwara rinodiwa kuti munhu akwanise kutengesa kunze kwenyika kana kuti Phytosanitary Certification.
Vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itevedze zvinodiwa nedzimwe nyika kuti ikwanise kutengeserana nenyika idzi.